Izindawo ze-Casino zase-Danish Online | Amakhasino e-inthanethi Amakhasino e-inthanethi
(655 amavoti, isilinganiso: 4.00 out of 5)
Iyalayisha ...Kusukela ngo-1948, eDenmark, kwakunobukhosi emkhakheni wezokugembula, owawungowenkampani yombuso ngaphansi kwegama likaDanske Spil. Akumangalisi ukuthi izwe lakhula kahle ngaphansi kwezikhungo zokugembula ezingaphansi komhlaba, kodwa ngo-1990 eDenmark, kwaba nokugunyazwa ngokusemthethweni kwekhasino. Yize uDanske Spil esabambe iqhaza ekubuseni ilotho nokujaha amahhashi, umjaho we-greyhound, kanye nomjaho wamajuba, ukuhlelwa kokunye ukugembula kwe-vidiv kwatholakala ezinkampanini ezizimele, kepha ngokulinganiselwa okuthile: izinkampani zangaphandle zingavula ikhasino ezweni kuphela ukudala ngokuhlanganyela inkampani nomlingani waseDenmark, isibonelo, umnikazi wendawo.
Inothi lezivakashi eziya enkombeni yethu yokugembula eku-inthanethi ukuthi kuze kube manje, zonke izinhlobo zokugembula eDenmark zithathwa njengezisemthethweni. Umthetho wezokugembula eDenmark unqume yonke imithetho yokusebenza kwemakethe yokugembula yaseDenmark. Gada ukwenziwa kwalo mthetho, futhi ubuye ubhekane nezinkinga zokuthola ilayisense lokugembula I-Danish Gambling (Spillemyndigheden).
Ukugembula ku-intanethi kuDenmark
Januwari 1, 2012 kwaba yisikhathi sokuguquka emlandweni wokugembula okuku-inthanethi eDenmark. Kusukela ngalolo suku kwaqala ukusebenza umthetho omusha olawula ukugembula ezweni. Yize i-Danske Spil igcine amandla ayingqayizivele ezinhlotsheni ezithile zokugembula, izinkampani ezizimele kanye nabantu ngabanye sebengamasayithi atholakalayo okugembula online eDenmark, ikakhulukazi ukubheja oku-inthanethi kumasayithi ezemidlalo nasezindaweni ze-casino eziku-inthanethi. Ngokuya ngomthetho wezokugembula okuku-inthanethi eDenmark, kumuntu osebenzela izwe ukugembula angahlinzeka ngezinsizakalo zokugembula ku-inthanethi ezweni, kudingeka ukuthi kuhlolwe futhi athole ilayisense eDenmark, kanye nokukhokha imali ethile.
Kakade onyakeni wokuqala wokusebenza kwelayisensi yomthetho entsha sekutholwe abahlinzeki abangama-25 bamakhasino aku-inthanethi, kufaka phakathi abanye babaqhubi bamazwe aphesheya abanjengo-888, uBwin noLadbrokes. Ngasikhathi sinye, uHulumeni uhlala enza umzabalazo wokulwa nezindawo zokugembula eziku-inthanethi ezingenamalayisense eDenmark, ezifakwa ohlwini lwabamnyama futhi zivinjelwe.
Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 Danish Online ze-Casino
IDenmark Scandinavia ebizwa ngokuthi iparele akuyona nje le: indawo encane yezwe inani lamagugu emvelo nawomlando liyadlula nje. AbakwaSasinoToplists bakutshela ngezici ezibaluleke kakhulu zaseDenmark, kanye nesimo sengqondo samaDanes ngokugembula.
IDenmark - ingcosana yejografi nomlando;
Izinkampani zangaphandle kumele zibe ne-orchestra yendawo ekuhleleni imidlalo yokugembula;
Ithikithi yokungena ekhasino.
I-Casino Amazwe ayisithupha ase-Aalborg, i-Orhusskae, i-Clamps, i-Odense, i-Helsingor futhi, eqinisweni, enhloko-dolobha yaseCopenhagen;
Izinto ezinhlanu zaseCopenhagen inhloko-dolobha yaseDenmark namakheli;
Amaqiniso anentshisekelo ngeDenmark namaDanes.
Indawo yaseDenmark kanye nencwadi encane yomlando
IDenmark ibizwa ngokuthi yi-Kingdom of Denmark ilungile. Yizwe elisenyakatho neYurophu futhi lingaseningizimu kakhulu emazweni aseScandinavia. Izwe lisenhlonhlweni yaseJutland naseziqhingini ezincane zalesi siqhingi, futhi lihlanganisa iziQhingi zeFaroe neGreenland.
IDenmark kuze kube manje isalokhu ingumbuso wobukhosi ngokomthethosisekelo, futhi kufanele kwaziwe ngaleso sikhathi izwe lalingumbuso onamandla kakhulu - kwaze kwaba yilapho amakhosi aseDenmark ekhulu le-19 “ebambe isibhakela sakhe,” iNyakatho Yurophu yonke. Manje iziqhingi zaseFaroe naseGreenland zinezinga eliphakeme lokuzimela nokuzimela. Kusukela ngo-1972, iDenmark ilawula indlovukazi engu-54-th egama linguMargrethe II.
Amakhasino Nokugembula eDenmark
Ukwenza amakhasino abe semthethweni ezweni kwenzeka ngo-1990 futhi kuwo kwakhiwa isisekelo selayisense labasebenza kwamanye amazwe. Isimo esiyinhloko sokukhishwa kwelayisense - inkampani yangaphandle yezinsizakalo zokugembula ukudala inkampani yaseDenmark ngokubambisana nenkampani ekhona yaseDenmark. Indlela elula kunazo zonke yokwakha ubudlelwano obunjalo ezansi kwanoma iliphi ihhotela, okwenzekile.
Ukuhambisana ngokugcwele nohlangothi lwaseDenmark abasebenza njengo "Holland Casino" abavela eNetherlands angomakhelwane, "Bad Neuenahr" waseJalimane, "Amakhasino ase-Austria" ase-Austria. Izinga lentela kuhulumeni liphezulu, kuya ngenzuzo yekhasino eqala kusuka ku-45% wenzuzo yonyaka.
Okwamanje, izwe linamakhasino amakhulu ayisithupha. Zitholakala e-Aalborg, e-Orhusskae, eClamps, e-Odense, eHelsingor futhi enhloko-dolobha iCopenhagen.
Amakhasino Copenhagen. Imithetho ejwayelekile ekhasino ihlangabezana ngempela nekhasino yaseYurophu iqala ngo-14.00 futhi iphela ngo-4.00. Vakashela ikhasino kungaba kuphela lapho uneminyaka engu-18, ngakho-ke udinga ukuba nepasipoti.
Enye i-nuance - emnyango uzocelwa ukuthi ukhokhe imali yokungena. Ithikithi losuku libiza ama-kroner angama-95 aseDenmark (cishe u- € 12), isonto elilodwa - 265, nangonyaka we-2.095 DKK. Ehlobo, ungavakashela i-casino ngama-shorts nama-shales, kepha izingubo zezemidlalo lapha azemukelekile.
Lapho umdlalo we-poker ekhasino akufanele ugqoke izibuko, sebenzisa i-iPod futhi ugqoke izikibha ngaphandle kwemikhono. Kepha phakathi nochungechunge lomhlaba lwe-poker njenge-WPT neminye imithetho emikhulu yokuncintisana maqondana nokubukeka kwentando yeningi.
Kukonke, amakhasino eCopenhagen athandwa kakhulu futhi adingeka kakhulu. Inakho konke okungafisela umphefumulo womgembuli kuphela: iRoulette (yaseYurophu neyaseMelika), zonke izinhlobo zemishini yokubheja (izinketho eziyi-140), amatafula e-poker, i-blackjack, ne-Punto yaseBanco.
Ngaphandle kokuhamba okujwayelekile phakathi nendawo yedolobha nokuhlolwa kwendabuko eHholo, izindawo eziseduze, nesikhumbuzo se-Little Mermaid, i-Copenhagen inikeza ukuvakashelwa nokukhangisa okuyingqayizivele.
Museum "Kukholwe noma ungakukholwa!". Ikheli: i-R å dhuspladsen , 57. Kulesi sigcinamagugu esingajwayelekile ngaphansi kophawu oluthakazelisayo "Kholwa noma ungakukholwa!" Iqoqo uLoyoy Ripley - isihambi nomqoqi. Eminyakeni edlule, amakhulu ohambo emhlabeni wonke uqoqe izinto eziningi ezimangazayo. Lapha uzothola umdlalo weTaj Mahal, amathambo wesilwane esikhulu, ihabhu, edlala ngaphandle kwezintambo ngisho nolwandle kuyahlekisa.
Umnyuziyamu we- “Experimentarium”. Ikheli: UTuborg Havnevej, 7, Hellerup. Uma uhamba nezingane noma ufuna ukuqonda yonke imithetho yemvelo efanayo - yindawo enhle impela leyo. Kukhona umshini we-polygraph ongabiza isiphepho nokuzamazama komhlaba, nezinye izinto eziningi ezikhangayo. Yonke imibukiso ingathintwa.
Umnyuziyamu "Guinness". Ikheli: Østergade 16. Le mnyuziyamu ayidingi kungeniswa, njengoba amarekhodi eGuinness mayelana nawo wonke umuntu azi. Kepha uma ufunda cishe noma yiliphi irekhodi, kwesinye isikhathi kunzima kakhulu ukukucabanga. Lapha ungathola imibukiso engaphezu kwama-500 yamarekhodi athakazelisa kakhulu, kanye “nombukiso I-Mystic Exploratorie » ungakwazi ukubamba isithunzi sakho, ukushintshanisa amakhanda nomuntu ohleliwe ohleliyo ngisho nokuhlala esihlalweni sikagesi.
Ipaki “Tivoli” yokuzijabulisa. Ikheli: IVesterbrogade 3. Leli paki lokuzijabulisa lidala kunawo wonke emhlabeni futhi, ngasendleleni, waphefumulela kanye uWalt Disney ukudala inethiwekhi yeDisneyland. Akukho ezikhangayo ze-supernavorochennogo, kepha kunomoya othokomele kakhulu wokugubha nenjabulo.
Umnyuziyamu we- "Erotica". Ikheli: I-Kobmagergade 24. Lesi yisigcinamagugu sokuqala esivusa inkanuko emhlabeni, wavela ngo-1992. Lapha ungakwazi ukulandelela umlando wezimo zengqondo maqondana nezinkanuko kusukela eRoma lasendulo naseNdiya kuze kube namuhla. Kunemidwebo, izithombe ezibaziweyo, izithombe namavidiyo, kanye nezingubo zangaphansi ezivusa inkanuko nazo zonke izinhlobo zamadivayisi ezivela esiqondisweni se-sadomasochistic. Ngena ngemvume ngezizathu ezisobala, uneminyaka eyi-18, kepha abafundi abanesaphulelo esingu-50%.
Amaqiniso anentshisekelo ngeDenmark namaDanes
Usuku lokusebenza luqala ekuseni - ngo-8 ekuseni, abakwaDanes baya emsebenzini, futhi ngo-16.00 abakhululiwe. Izitolo nazo zivaliwe kusenesikhathi, ngakho-ke amaDanes enza imikhiqizo eyinhloko ethengwe ngempelasonto;
IDenmark inentela ephakeme kakhulu - isilinganiso esingu-43%. Kuya ngezinga lemali engenayo yesakhamuzi kanye nezinzuzo okufanele zisizuze;
Emsebenzini, yonke iDane ithola ukudla kathathu ngosuku. Umkhankaso waseDenmark, inkampani noma inhlangano ngokwesiko inegumbi layo lokudlela nabapheki;
Amadoda aseDenmark enza imisebenzi yasendlini ngokulingana nabesifazane. Bageza phansi, banakekele izingane futhi abanankinga nokupheka okuthile okumnandi.
Izindlu eDenmark zibiza kakhulu futhi ngenxa yalokho zivame ukuba sezingeni eliphansi. Amajika wezindonga, futhi kwesinye isikhathi akuyona ukuhlela okuhle okwenzekayo emafulethini amaningi.
EDenmark, ukunakekelwa kwezempilo kwamahhala, ngasikhathi sinye kudokotela ngamunye womndeni kunamathisele inani elithile leziguli. Lokhu kwenziwa ngokwendawo, futhi uma uzohamba, bese udokotela kuzofanela ashintshe;
IDenmark - Isizwe sebhayisikili. Bathandwa kakhulu futhi bayaziswa.
Denmark ebalazweni laseYurophu
Ukugembula kuma-casino eDenmark
Esibonelweni saseDenmark, ungabona ukuthi iyiphi indlela okufanele ilandelwe, uma umsebenzi ukudala imboni yokugembula ekhangayo. AbaseDanes, yize benomoya ophansi, abanandaba nokuchitha isikhathi ekhasino, futhi ngenxa yalokho banalo lonke ithuba.
Asikwazi ukusho ukuthi ngabe ikhasino eDenmark, kuzo zonke izinyathelo, akunjalo. Izwe linabaqhubi abayisikhombisa kuphela abalawula amalayisense, kanti kusalindwe izicelo ezimbili. Kodwa-ke, ngisho nekhasino, okungukuthi, yanele ukwanelisa izintandokazi zokugembula zamaDanes. Ngendlela, eDenmark, likhaya labantu ababalelwa ezigidini ezi-7, kanti amakhasino ayi-5 ahlangabezana kanzima nokutheleka kwezivakashi. Futhi uma unenhlanhla eyanele yokuvakashela leli zwe elihle, qiniseka ukuthi uvakashela enye yalapho ikhasino. Izikhungo zokugembula zivame ukutholakala esigabeni somlando, esakhiweni sehhotela, futhi kuyathakazelisa ngisho nokuvakashela nje.
E-Aarhus, idolobha lesibili ngobukhulu eDenmark, lisebenza elinye lamakhasino amahle kakhulu waseDenmark. Ayaziwa kuphela ngezindawo zangaphakathi ezinhle, kodwa nangekhwalithi yesevisi. Lesi sakhiwo sikhona futhi kunehhotela likanokusho i-Hotel Royal, elithanda ukuhlala osaziwayo nabantu abacebile. Endaweni yehhotela kunezindawo eziningi zomlando. Kukhona neQuarter eyaziwayo neLatin enezindawo zokudlela ezinhle zemifula nezitolo.
Ngokuqondene nemidlalo etholakalayo ekhasino itholakala ngamatafula ambalwa wokubheja kuma-roulette, ama-blackjack namahlaya e-poker. Emahholo ungathola imishini engama-80 yokuqala. Imvamisa izindonga zekhasino ziba nemincintiswano emikhulu ye-poker.
IDenmark ekhangayo, iqiniso lokuthi idolobha ngalinye, hhayi inhloko-dolobha kuphela, liyakwazi ukuthwebula izivakashi. Umuntu angacabanga ukuthi wonke amakhasino atholakala eCopenhagen, kodwa akunjalo. Enye yezokugembula emnandi kakhulu isebenza ngempumelelo edolobheni lase-Aalborg. Amakhasino angenasidingo atholakala esakhiweni sehhotela enkabeni yedolobha namaphethelo ahlala egcwele impilo. Amakilabhu amaningi, izindawo zokudlela ezithokomele nezindawo zokudlela ezincane ngeke zithole abalandeli abanesithukuthezi bempilo yasebusuku. Ekhasino ungadlala izinhlobo eziningana ze-roulette, i-poker neminye imidlalo yamakhadi. Futhi kuyatholakala ezindaweni ezingaphezu kwezingu-30, kufaka phakathi ama-jackpots aqhubekayo.
Kodwa-ke, ikhasino enkulu kunazo zonke eDenmark etholakala enhlokodolobha yayo. Kwavulwa ngo-1990 ngosuku olwandulela uNyaka Omusha futhi kwaba yisikhungo sokuqala sokugembula esisemthethweni ezweni. Uma udinga ukukhetha okuphelele kokuzijabulisa kwekhasino, kuzodingeka uqale ukukufuna eCopenhagen. Amatafula amaningi wokudlala kanye nama-slots angaphezu kwekhulu avumela ukuthola umdlalo ngendlela oyithandayo. Ngendlela, imicimbi enkulu ye-poker ivame ukuhlelwa ngaphakathi kwezindonga zalesi sikhungo. I-Casino ihlala kwelinye lamahhotela amahle kakhulu e-Radisson Blu Scandinavia.
Ukugembula ku-intanethi eDenmark
Lokhu okutholakele kungachazwa ukuthi isibalo sabantu baseDenmark sisebenza amahora amafushane, kepha, nokho, isilinganiso semali engenayo - ephezulu kakhulu emhlabeni.
Kubonakala sengathi ifomu lokuphumelela (uma likhona nhlobo), kodwa amaDanes awazange achithe sonke isikhathi sabo samahhala ekubutheni i-Lego.
Abantu abathola imali engenayo kuleli zwe banomthelela ekunyuseni okubukhali ekuthandeni kwezokugembula kwe-intanethi.
Ngaphambi kukaJanuwari 1, 2012 uDanske Spil ophethwe nguhulumeni nguyena owayephethe ilayisensi yale nhlangano futhi enza amanani entela. Zonke izinkampani zaseDenmark nezakwamanye amazwe zazingavunyelwe ukunikeza ezokuzijabulisa nokugembula kwezemidlalo. Kepha uhulumeni wasekhaya uphoqelekile ukuthi asishintshe lesi simo, ngoba umthetho awusebenzi kahle, futhi kunezindawo ezingaphezu kwama-400 zokubheja ezemidlalo ukuthatha ukubheja kwabakwaDanes. Izinsizakusebenza eziningi zinikezwa nolimi lwesiDenmark ukwenza kube lula kubasebenzisi ukubheja inqubo.
Imithetho emisha ivumela ukuhlinzeka ngezinsizakalo zayo ezinkampanini ezinjengeLadbrokes kanye ne-bet365, yize umbuso ugcine ubukhosi bokubhejela ezinhlangeni zezilwane nokugembula, okususelwa enhlanhleni. Kubhekiswa emidlalweni efana namakhadi okuqala kanye nebhingo, lapho umdlali angasebenzisi isu noma ikhono futhi ancike kuphela ngezikhathi ezithile.
Ngaphandle kokulahleka kwamalungelo akhethekile okuhlela nokwenza inkampani yokugembula iDanske Spil izimali zanda kakhulu ngemuva kokushintshwa komthetho, futhi manje sehlukaniswe izinkampani ezimbili: iDanske Lotteri Spil neDanske Licens Spil. Lesi sakamuva sihlanganisa umkhakha wezokudlala ku-inthanethi futhi muva nje uqophe ukwanda kwemali engenayo ngama-60% uma kuqhathaniswa nonyaka odlule.
Namuhla, abaseDanes banamathuba amaningi okugembula. Bangadlala imidlalo efana ne-poker online ngokulwa nabanye abadlali emhlabeni jikelele. Kepha uhulumeni waseDenmark usebenza ngokucophelela ezinkampanini zokukhangisa nezokunikeza amalayisense ezitholakala phesheya zilawulwa yimithetho eqinile.
Njengabaningi baseYurophu, abaseDanes bayalithanda ibhola futhi bafaka iqembu elikhulu lasekhaya leSuper League. I-English Premier League nayo ithandwa kakhulu ngenxa yokuthi ivamise ukukhonjiswa kwiDenmark Satellite (abaseDanes bangabona imidlalo engama-280 kwengu-380 ngesizini ngayinye).
Muva nje, intshisekelo eyengeziwe egalofini, ikakhulukazi ngenxa yempumelelo kaThomas Bern. Umdlali osemncane uTorbjörn Olesen, ngokusobala, uzofaka isandla ezithakazelweni zabalandeli. I-Handball ne-badminton bathole impumelelo eqhubekayo, kanye nomgibeli wamabhayisikili osezingeni lomhlaba owazuza imiklomelo emjahweni webhayisikili i- “Tour de France”.
AmaDanes nawo ayengumlutha we-poker. Ukuthandwa kwe-online poker kwaqala ukukhula ngokushesha ngemuva kokuphumelela kobuqhawe be-poker uGus Hansen ekuqaleni kweminyaka yama-2000. EDenmark, abadlali abaningi be-poker abangochwepheshe, izwe limi ezingeni lama-25 ohlwini lweWSOP emhlabeni. Ukugembula Umphakathi waseDenmark ukhetha amasayithi we-poker ahlolwe isikhathi njengePhathi Poker.
Ikusasa lokugembula eDenmark
Ukugembula eDenmark kwaqala ukukhula ngokushesha ngemuva kokwethulwa kwemithetho emisha imali engenayo yonyaka odlule yomkhakha wezokugembula yaba ngu-4 billion DKK.
Kodwa-ke, uhulumeni wenza konke okusemandleni ukuvimbela amawebhusayithi wokugembula angaphandle angenamalayisense ahlinzeka ngezinsizakalo kumaDanes. Lokhu kuholele ekutheni ngo-2012 kuphela, izingosi ezingama-57 zaqoshwa ohlwini lwabashokobezi.
Akumangalisi-ke ukuthi, ngemuva kwamashumi eminyaka kulawula ukubhejela eDenmark, inkampani yakwaDanske Spil isaphethe ama-62% emakethe. Kungathatha isikhathi ngaphambi kokuba abanye abadlali bakwazi ukuncintisana nabhuki, izinsizakalo zabo ezisetshenziselwa ukusebenzisa iningi labantu baseDenmark.
0.1 Ukugembula ku-intanethi kuDenmark
0.2 Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 Danish Online ze-Casino
3 Ukugembula eDenmark
3.0.1 Indawo yaseDenmark kanye nencwadi encane yomlando
3.1 Amakhasino Nokugembula eDenmark
3.1.1 Izivakashi zaseCopenhagen
3.1.2 Amaqiniso anentshisekelo ngeDenmark namaDanes
3.1.3 Denmark ebalazweni laseYurophu
4 Ukugembula kuma-casino eDenmark
4.1 I-Royal Scandinavian
4.2 i-Casino Aalborg
4.3 I-Casino Copenhagen
5 Ukugembula ku-intanethi eDenmark
5.0.2 Izimakethe ezidumile
5.0.3 Ikusasa lokugembula eDenmark
i-delaware lotto play 3